यी राशी भएका पुरुषहरूले पाउँछन् सुन्दर र गुणवति श्रीमती ! – Life Nepali
यी राशी भएका पुरुषहरूले पाउँछन् सुन्दर र गुणवति श्रीमती !
एजेन्सी । खासगरी हरेक पुरुषले आफ्नो जीवनसाथी सुन्दर होस् भन्ने चाहना राख्छन्। तर, यो सौभाग्य कसैलाई जुर्छ, कसैलाई जुर्दैन। यसमाथि पनि सबैले सुन्दरतालाई मात्रै जीवनसाथीको मापक नराख्न पनि सक्छन्। यद्यपी, ज्योतिष शास्त्र अनुसार यी तल प्रस्तुत गरिएको राशिका पुरुषहरुले सुन्दरसँगै गुणवती जीवनसाथी पाउने विश्वास गरिन्छ। *** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ 👇️ तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ***
तुला राशि: ज्योतिष शास्त्र अनुसार तुला राशि भएका पुरुष सबैभन्दा भाग्यमानी मानिन्छन् । तुला राशि भएका व्यक्ति धेरै भावक र समझदार हुने पनि गर्छन । यी राशि भएका पुरुषकोप प्रमुख विशेषता भनेकै आफ्नो सहयात्रीसँग गहिरो सम्बन्ध स्थापित गर्न सफल हुनु हो। कन्या राशि: कन्या राशि भएका पुरुष धेरै सुन्दर हुने विश्वास छ । यस्तो राशि भएका व्यक्ति कुरा गर्नमा पनि सिपालु हुन्छन् । कन्या राशि भएका व्यक्तिमा खास गरेर केटीलाई पट्याउने अनौठो कला पनि हुन्छ । जसकारण उनीहरु सुन्दर केटीलाई आफ्नो जीवनसाथी बनाउन सफल हुन्छन् ।
कर्कट राशि: शास्त्रमा वर्णन गरिए अनुसार कर्कट राशि भएका व्यक्ति पनि भाग्यशाली मानिन्छन् । यो राशि भएका व्यक्ति धेरै दूरदर्शी हुन्छन् । यसको अतिरिक्त यो राशि भएका व्यक्ति भविश्यका लागि सजग पनि हुन्छन् । *** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ 👇️ तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ***
Previous कपनमा बालिका फ्याँ’किएको खबर झु’ट, पैसा क’माउनकै लागि,! बालगृह सञ्चालिकाको योजना पर्दाफास’ भिडियो”
Next बिबाह भएको केही दिनमा नै भयो अहिलेसम्म नभएको सबै च’कित हुने घ’टना !